“ဗီယက်နမ်ကို အခုလို အနိုင်ယူလိုက်တာ လက်ရွေးစင် အသင်းကြီးအတွက် ကလဲ့စား ချေနိုင်လိုက်တာပါပဲ။ မြန်မာ ပရိသတ်တွေ အတွက် ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါမယ်” ဟု မြန်မာအသင်းနည်းပြ ဦးဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က ဆူဇူကီးဖလား ပြိုင်ပွဲတွင် ဗီယက်နမ်အသင်းအား ၇ ဂိုး – ၁ ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
This entry was posted on December 23, 2010 at 11:19 am and is filed under အားကစား, ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.